Taariikhda Tareenka - Safarka Qoyska | Seymour, IN | Xarunta Booqdaha ee Degmada Jackson
Bogga ugu weyn / Soojiidashada / Matxafka / Taariikhda Tareenka
Jackson County Indiana waxay hodan ku tahay taariikhda tareenka. Tiro khadadka tareenka ah oo dhex mara aagga. Bulshooyinka miyiga yar ayaa ku koray dadka iyo warshadaha waxayna soo dhoweeyeen kuwa shaqo doonka ah iyo kuwa dhulka iibsanaya iyo kuwa degaya.
Intii lagu jiray dabayaaqadii 1840-yadii, wadada tareenka ee Jeffersonville iyo Indianapolis waxaa la dhisay iyadoo woqooyi-koonfur loo sii marayo Seymour, oo markaa loo yaqaanay 'Mule's Crossing.', Dhulka waxaa iska lahaa qoyska gaashaanka. Sanadkii 1852, shirkad tareen-bari-galbeed ka xigta waxay daneyneysay inay ka dhisto Seymour sidoo kale. Ohio-Mississippi Railroad Co. waxaa loo soo bandhigay heshiis qaali ah oo lagu dhisayo hantida Gaashaaman ee Meedy Shields. Xitaa wuxuu ku yaboohay in laga dhiso 3-mayl buuxis ah ilaa marshlands, hanti bakhaar, dukaan lagu wareejiyo iyo dukaan dayactir wuxuuna ku yaboohay magalada in loogu magac daro injineerka O&M, Charles Seymour. Sanadkii 1852, Seymour wuxuu noqday isgoys laba tareen oo waaweyn. Capt. Meedy Shields wuxuu noqday senator-gobol wuxuuna hubiyay marinka biilka badbaadada ee looga baahan yahay dhammaan tareennada inay ku istaagaan dhammaan isgoysyada tareenka. Isaga dartii, labada waddo ee tareenka ayaa lagu qasbay inay istaagaan Seymour, oo ku weynaa ganacsiga iyo magaalada yar. Seymour waxaa lagu soo daray 1864 oo ay ku nool yihiin 1,553.
Ka faa'iideysiga Ciyaaraha James-Younger iyo Butch Cassidy iyo Sundance Kid waa halyeeyo, laakiin in yar ayaa og in dhaca tareenka hubeysan ay hormuud ka ahaayeen burcad aan aad looga aqoon gobolka Jackson. Waxaa lagu soo barbaaray aagga Rockford, walaalaha Reno waxaa la sheegay inaysan jeclayn iskuulka iyo barbaarintooda adag. Xatooyo, xatooyo faras, dab qabadsiis iyo olol dambiyeed ka dhaca dhammaan Galbeedka ayaa ahaa bilowgii oo keliya.
Markay ahayd Oktoobar 6, 1866, John iyo Simeon Reno iyo Frank Sparks waxay fuuleen tareen O&M oo ku yaal Seymour markii ay ka baxeen magaalada iyagoo ku qasbay farriinta inuu furo kaydka. Waxay xadeen $ 12,000 ilaa $ 18,000 waxayna riixeen amaan kale, oo lagu xamanayay inay gudaha ku hayaan $ 30,000, tareenka. Amnigan, oo bixinaya mid aad u culus, waa laga tegey.
Renos-ka waxaa qabtay Wakaaladda Dambi baarista Qaranka ee Pinkerton waxaana lagu xiray New Albany, IN (qiyaastii 55 mayl oo u jirta Seymour). Frank Reno iyo Charlie Anderson ayaa ku xirnaa Canada dambiyo ay galeen waxaana lagu wareejiyay New Albany.